शब्दैभरि महिलालाई चेतना | SouryaOnline
शब्दैभरि महिलालाई चेतना
सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २८ गते २:१३ मा प्रकाशित
यो धर्ती यो आकाश आधा हिस्सा हाम्रै हो
आफ्नो हक लिनलाई अघि बढ्ने हो
मधु गुरुङले यी शब्द सिर्जना गर्नुपछाडि नेपाली महिलाको पीडाले उनलाई धेरै पटक झक्झक्याएका छन् । चालीस वर्षअगाडि झापाको शनिश्चरेमा पहिलोचोटि धर्ती टेकिन् मधुले । महिला भएकै कारण भोग्नुपर्ने सामाजिक दमन मुख बाएर उनलाई पनि झम्टिन बसिरहेकै थियो, अरू महिलालाई जस्तै । बालापन तिनै अप्ठ्यारा भोगाइमा रुमल्लियो । कमजोर बाल हृदयले यति कठोर पीडानुभूति गरेछ कि उन्मुक्तिको विकल्प एउटै ठम्याएछ- सबै खालका सामाजिक असमानताविरुद्ध लड्नु ।
त्यसको हतियार उनले माथिको गीतमा उल्लेख भएजस्ता शब्दलाई बनाइन् । समान किसिमले बाँच्न पाउने अधिकारप्राप्तिका लागि महिलालाई झक्झक्याउन यो गीत लेखेर संगीत भरिन् अनि आफ्नै आवाजमा गाउँबेंेसी थर्काइन् । लोकतन्त्रको आगमनपछि नयाँ दिन आयो एल्बममा उनले समेटेको यो गीतले महिलाका माझमा राम्रै प्रभाव जमायो । संगीतले जुनसुकै वर्ग अनि उमेरका मानिसको हृदयलाई सोझै समात्न सक्ने मनोवैज्ञानिक शक्ति बुझेकी उनले यसैमार्फत अघि बढ्ने योजना बनाइन् । हार्मोनियम अनि मादलसँग सात सुरको संयोजनबाट महिलालाई घच्घच्याउने अनि पुरुषलाई खबरदारी गर्नमा निरन्तर लागिपरिन् ।
झ्वाट्ट सुन्दा कुनै राजनीतिक दलले जनतालाई आकर्षण गर्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा बजाउनेजस्ता पनि लाग्छन् उनका गीत । अधिकारप्राप्तिको आन्दोलन पनि राजनीतिक आवरण बोकेरै सडकमा तातिरहेको हुन्छ तर, मधु राजनीतिज्ञ होइनन्, न त कार्यकर्ता । किन आइनन् त उनी राजनीतिमा ? कि गीतमार्फतै राजनीति गरिरहेकी छन् ? प्रतिवाद गरिन्- ‘राजनीति किन गर्नुपर्‍यो मैले ? नेताको पाँच घन्टाको प्रशिक्षणभन्दा मेरो पाँच मिनेटको गीतले मान्छेलाई छुन सक्छ, मन परिवर्तन गराउन सक्छ ।’ तर पनि गायनमार्फत सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उनको रुचि आफैंमा एउटा अभियानजस्तो लाग्छ । गायक लक्ष्मण रायमाझी उनलाई सघाइरहेछन् ।
पञ्चायतको विरोधमा आयोजना हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा रुचिपूर्वक सहभागी हुन्थिन् रे उनी । रूपान्तरणमुखी गीत गाउन थालेको २३ वर्ष पुगेछ । पञ्चायत रहुन्जेल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएर सामाजिक विभेदविरुद्ध सांगीतिक विरोध गरिछन् । पछि उनलाई आफ्नै किसिमले स्वच्छन्द भएर अभियानमा लाग्न मन लागेछ । भन्छिन्- ‘म कसैसँग पनि आबद्ध छैन, आफ्नै हिसाबले गायनमा सक्रिय छु ।’
ए साथी, ए सुकुम्बासी कति खान्छौ दौराको फेर थापी । पहिलोपटक उनी यो गीतमा नाचेकी थिइन् रे । ‘तर मलाई यसको अर्थै थाहा थिएन, जब थाहा पाएँ निकै खुसी लाग्यो’- भनिन् ।
बाउको बोली साङ्लोजस्तो दाइको बोली हत्कडी
घरमै कैदी भए अघि बढ्ने कसरी ?
यो गीतमा मधुले तिनै महिलाको पीडा गाएकी छन्, जो परिवारभित्रै पनि स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाइरहेका छैनन् । वेग भाग-१ मा संगृहीत गीतका शब्द उनका पनि व्यक्तिगत भोगाइ हुन् रे ! सुनाइन्- ‘जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि नेपाली महिलाको नियति यही नै थियो, अझै यस्तै नै छ ।’ महिलालाई अधिकार दिनु पुरुषलाई दास बनाउनु हो भन्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको उनले ठहर्‍याएकी रहिछन् । भन्छिन्- ‘अझै पनि महिलाहरू अगाडि बढेको देख्न सक्दैनन् पुरुषहरू ।’
केही गर्न खोज्ने महिलालाई जहाँ पनि चुनौती छ । मधुले समातेको कलाकारिता पनि त्यसबाट अछुतो छैन । चुनौती फेस गर्न डराएर र्फकनेमा पर्दिनन् मधु । निकै दृढ छिन् आफ्नो यात्रामा । भन्छिन्- ‘चुनौती फेस गर्न मुख्य कुरा त आफ्नो इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार अधिकांश कलाकारमा सामाजिक जिम्मेवारीबोध हुँदैन । ‘अरू भएनन् भनेर म आफ्नो जिम्मेवारी भुल्न सक्दिनँ, मैले भोगेको समाजले मलाई यस्तै प्रेरणा दिएको छ’ -उनीचाहिँ यसो भन्छिन् ।